Meiigoo S8 giveaway, midka ugu fiican ee bilaashka ah Samsung Galaxy S8 Plus clone !! | Androidsis
Meiigoo S8 Bixinta Caalamiga ah !!
Francisco Ruiz | | Dood-wadaag, Mobiles
Sida aan ugu jirno taariikhaha kirismaska ​​qof walbana wuxuu jecel yahay inuu helo hadiyad wanaagsan, waxaan ka fikirnay abaabulka tan Bixinta Meiigoo S8, taas oo aniga ahaan ah, iyo sidii aan horeyba ugu soo sheegay sanduuqa aan xirnayn, waa midka ugu fiican ee Samsung Galaxy S8 Plus.
Un Isku aadka Caalamiga ah ee Meiigoo S8, taas oo aan dooneyno inaan u isticmaalno abaalmarin ahaan bulshada weyn ee Androidsis ee aan ka abuureyno Telegram, beel in waxaan horey u dhaafnay 6500 xubnood Midda aan dooneyno inaad ogaato haddii ama haddii sababta oo ah waxaan ognahay inaad jeceshahay, labadaba bulshada Androidsis iyo barnaamijka Telegram, oo loogu talagalay in badan oo ka mid ah codsiyada farriinta deg-degga ah ee ugu badan ee is-dhaafsiga badan. Marka hadda waad ogtahay, haddii aad rabto inaad ku guuleysato Meiigoo S8 ee Kirismaska, sii wad aqrinta qoraalkan maaddaama kaliya aan ku weydiin doonno laba shuruudood oo khasab ah oo aad kula kulmi doontid ugu badnaan 20 ilbidhiqsi.
Saldhigyada si ay ugaqeybqaataan isku aadka Meiigoo S8
Noqo muwaadin adduunka ah.
Ha Telegram ayaa lagu rakibay Android-kaaga. Well Telegram, Dheeraad Messenger, Mobogram, Morogram ama macmiil kasta oo Telegram ah.
Iska leh GrupoAndroidsis oo ku saabsan Telegram.
Ka diiwaangeli dukaanka TechnoChollos 2017 dukaanka rasmiga ah ee Androidsis ee Telegram halkaad ka heli doontid heshiisyada tiknoolajiyada ugu fiican oo waxaad ka ogaan doontaa ka hor qof kasta oo kale raffles ka dhaca Androidsis.
Fariin uga tag Beesha Androidsis ka dib markii aad ku biirto kooxda. Iyada oo Hello ah in sida oo kale ama fudud Hello ay durbaba ka badan tahay ku filan.
Waqtiga kama dambaysta ah ee kaqeybgalka isku aadka Meiigoo S8 wuxuu soconayaa laga bilaabo taariikhda daabacaadda qoraalkan wuxuuna dhammaan doonaa Diseembar 24, 2017 at 23:59 pm, Waqtiga Santa Claus si uu u xusho guuleystaha suurtagalka ah isla markaana xaqiijiyo inuu la kulmayo labada shuruudood ee kaliya ee khasab ah in la buuxiyo
Qofka ku guuleysan kara wuxuu haysan doonaa 24 saacadood inuu ku dalbado abaalmarintooda ka dib markii uu ka helo e-maylka 'Androidsis'.. Waxaan dhihi karnaa guuleyste waana xoojineynaa tan iyo markii gacanta lagu hubin doono in labada shuruudood ee loo baahan yahay la buuxiyay, ee ah ka tirsan tahay kooxda loo yaqaan 'Androidsis Group on Telegram' oo aad farriin ugaga tagtay kooxdaada, (tani waa inay awoodaan inay ku helaan haddii ay dhacdo inaad adigu guuleysato), iyo xaaladda labaad ee lagu qoro kanaalka dalabyada, gorgortanka iyo raffles TechnoChollos 2017, dukaanka rasmiga ah ee Androidsis ee Telegram.
Barxada loo adeegsan doono in lagu fuliyo isku aadka, xakamaynta iyo soo saarista guuleystaha ayaa ah barnaamijka caanka ah ee Gleam.io. Halkan waxaan kaaga tagnay badhan ficil ah si aad uga qayb gasho isku aadka loo yaqaan 'Meiigoo S8' dhowr jeer oo guji wax ka yar 20 sekan.
MUHIIM: Xitaa haddii aad horeyba uga tirsanaan jirtey bulshada 'Androidsis', waa inaad ku qaaddaa tillaabooyinka Gleam, haddii kale laguma tirin doono inaad ka mid tahay kaqeybgaleyaasha Isku aadka loo yaqaan 'Meiigoo S8'.
International Sortep Meiigoo S8
Nasiib wacan dhamaan intaad qarashgareyso xafladaha kirismaska ​​ee xiisaha leh ee lala yeelanayo qoyskaaga iyo asxaabtaada Iyo nasiib wacan Meiigoo S8 inay kusoo laabato gurigaaga Kirismaskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dood-wadaag » Meiigoo S8 Bixinta Caalamiga ah !!
Boqorka Emeritus dijo
Telegram? Waa hagaag waxba ...
Jawaab Boqorka Emeritus
Waxba, waa inaad haysataa Telegram ...
Ku jawaab Pacho Pérez Suárez
Salaan, waan cusbaa, sidee tahay? Ciidaha wanaagsan, hadda dhammaantiin waad wada jir tihiin Ok….
Ka qayb qaadashada!
Ivan Treviak dijo
Waan saxiixayaa, waad ku mahadsan tahay isku aadka
BQ wuxuu u furaa barnaamijka 'Android Oreo beta' ee loogu talagalay Aquaris X iyo X Pro
Waxaa laga saaray ilaa 85 barnaamij oo furayaasha sirta ah ka xaday dukaanka Play Store